Staff Gweta - Dzimba Kugadzikana Project
Prairie State Legal Services, Inc.chimwe chikamu chesangano repasi rese chekudzivirira kuwedzera kwekushaya pekugara nekuda kwechirwere ichi uye iri kutsvaga kuwedzera magweta matsva akazara munzvimbo dzedu dzeJoliet neKankakee kuti vawedzere mabasa edu epamutemo kune vanowana mari shoma. se ...
Harbour House nePrairie State Legal Services ichave ichitora yevakadzi Nhoroondo Yemwedzi kutenderera pa6 pm Kurume 30 kuburikidza Zoom. Chiitiko ichi chichafambiswa naHarbour House Executive Director Jenny Schoenwetter. Panelists vanosanganisira Vickie Smith, director director we ...
Kankakee United Virtual Expungement Fair, Kurume 22-26
ONGORORA REKODHODZO YAKO: Dzidza zvakawanda nezvekuti ndeapi marekodhi emhosva anokodzera kuvharwa WAIZVIZIVA HERE? Kana ikabviswa, rekodhi yacho haizoratidzike pane dzakawanda kumashure cheki yebasa nedzimba. RESOURCES: Bhuka musangano nePrairie State Legal Services kuti uone ...